Sanad ka dib Maxaa ka fulay Ballanqaadyadii Farmaajo ee Puntland iyo Galmudug? - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sanad ka dib Maxaa ka fulay Ballanqaadyadii Farmaajo ee Puntland iyo Galmudug?
January 31, 2019 January 31, 2019 Cali Yare935
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa xaqiijiyay in inta badan aysan hirgalin Ballanqaadyaddii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay Markii uu booqasho ku tagay degaanada maamulada Puntland iyo Galmudug sanad ka hor.
Janaayo, 10. 2018 Madaxweyne Farmaajo waxaa uu dhax dhigay waddo Laami ah oo isku xirta degaannada Dan-Goronyo iyo Eyl ee gobolka Nugaal, Ilaa iyo hadda ma jirto howl ka socota wadadaasi ma jiro guddiyo ka socda dowladda oo ku howlan bilaabida dhismaha Wadada oo qeyb horay uga aheyd isku tashiyo badan oo ay sameeyeen Shacabka kunool degaanada maamulka Puntland sidda ay Risaala u xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland
Hal Sano ka hor Madaxweyne Farmaajo waxaa uu degaanada Puntland iyo Galmudug ka sameeyay Dhaxdhigga Mashaariic ku dhow 20, maamulada degaanadaasi ka arimaya waxa ay sheegayaan in xataa aysan socon dadaallo lagu fulinaayo Mashaariicdii uu ballanqaaday Madaxweynaha oo markii horaba Siyaasiyiinta qaarkood ay la yaabanayeen sidda loo fulin doono.
Dhismaha dekedda degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayuu dhagax dhigay 23 Bishii January 2018, waa mid ka mid ah Mashaariicda dadka degaanada Galmudug ay u qabeen Baahida badan, Madaxweyne Farmaajo, xilligaasi waxaa uu sheegay in sidda ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono dekedda waxaana uu xukuumadda ku amray fulinta Mashruuca Dekedda.
Dekeddii wali howli kama socoto Sidda uu xaqiijiyay Shalay Senetor Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid oo sheegay in madaxweynaha hal sano ka dib looga fadhiyo fulinta dhismaha Dekedda Hobyo iyo Mashaariicdii uu ballanqaaday.
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu Magaalooyinka Qardho, Cadaado, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ka sameeyay Dhagax dhiggida xarumaha Jaamacadda Umadda, hal Sano ka dib ma jiro meel Magaalooyinkaasi ka mid ah oo laga bilaabay xarumaha Jaamacadda Umadda, waxaana siddaasi Risaala u xaqiijiyay Mas’uuliyiinta tacliinta Puntland iyo Galmudug.
Shacabka waxaa ku abuuray wel wel badan oo ku aadan sababta loo fulin waayay xataa hal ka mid ah mashaariicdii laga dhigax dhigay degmooyinka Galmudug iyo Puntland sababta xataa Guddiyo loogu saari waayay shaqaddaasi, Maadaama Madaxweyne Farmaajo uu Shacabka hortooda ka ballanqaaday dhismaha Mashaariicdaasi.
Hoos Akhriso dhammaan Mashaariicdii uu dhagax dhigay Madaxweyne Farmaajo Safarkii uu hal sano ka hor ku tagay degaanada Galmudug iyo Puntland.
Caleema saarka Axmed Madoobe oo dhawaan la qabanayo
October 5, 2019 Duceysane
Wadooyinka Muhiimka ah ee Muqdisho oo xiran
Alshabaab oo Guluf xooggan ku qaaday Mukhtaar Roobow (Xog faafaahsan)